एमाले अध्यक्षमा ओली र डा. रावलको उम्मेदवारी दर्ता — donnews.com
'नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएका डा. रावलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने अडान'
सौराहा, १३ मङ्सिर । नेकपा (एमाले) को अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओली र डा. भीम रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । उहाँहरु दुईबीच अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुने निश्चित भएको हो ।